Ukufuthwa kwezingane ezisenkulumeni kungenziwa ngokwezidingo eziqhelekileyo zokusilalisa. Into eyona nto kukuba kufuneka azuze umntwana, ncedise ukuphumla umzimba womntwana emva kokuzikhandla okukhulu komzimba wakhe owela kuyo yonke imini, kuba kwiminyaka emibini okanye emithathu umntwana uhlala ekhuthele kwaye eselula. Ngako oko, ukuxilisa kuhamba kakuhle ngokuhlwa, ngaphambi nje kokulala.
Ziziphi iimpawu eziphambili zokuxilisa abantwana, iminyaka yobudala ukuya kwiminyaka emithathu, ukufunda kwinqaku ngesihloko esithi "". Ubudala bokuqala esikolweni ngumntwana weminyaka emithathu ukuya kwisixhenxe. Ngeli thuba umzimba womntwana uyaqhubeka ukhula kwaye uphuhlise. Umqhubi walo mkhulu ukwandisa, kwaye ukuhamba kukhululeka kwaye kuqaphele. Isikhumba sinyusa kakhulu. Ulusu luba lukhulu kakhulu kwaye lukhuselekiswe kwiindidi ezahlukeneyo zempembelelo: umatshini, i-climatic, nangona umntwana kulo nyaka uphelelwa ngokugqithiseleyo kunabantu abadala. Isizathu salokhu kukuba indawo ebusweni kwesikhumba kumntwana wexesha lokufundela inkulu kakhulu kunommandla womntu omdala ngokwemitha yekhilomitha elilinganayo. Ngako oko, ummandla omkhulu ukhululeka kakhulu kwi-supercooling okanye, ngokuchaseneyo, ukugqithisa. Kungenxa yoko abantwana abasenkulweni bahlala begula ngenxa yezifo zokuphefumula. Ngeli thuba, abazali banenkinga - njani ukukhusela umntwana wakho kwiintlobo ezininzi ezilindele kuye kwi-kindergarten, esitalato nasekhaya. Yingakho umntwana oneminyaka engama-15 ubudala oneminyaka engama-15 ubudala. Njengokuba lukhuni lunokusetyenziswa kwenkqubo yamanzi kunye nomoya (ukucima kunye nokukrazula, ukuhlamba kunye nokunye okunjalo) kwaye, ngokuqinisekileyo, ukuzivocavoca umzimba, imisebenzi yezemidlalo, ukuzivocavoca kwamanzi kunye nokusila. Ngokudibeneyo, le nkqubo iya kunceda ukugcina impilo yomntwana, ukuqinisa nokuphefumula umzimba wakhe, kwaye ngenxa yoko, ukuhlakulela isifo esizimeleyo kwiintlobo ezahlukeneyo zezifo. Ngaphambi kokuqhubela kwi-gymnastics kunye nokusikwa, kuyimfuneko ukugxila ekunyamekelweni kakuhle kwabantwana kunye nemisebenzi yabo yemihla ngemihla. Emva kwakho konke, ukuzilolonga umzimba kunye nokusicaza akunakunceda xa umntwana engathobeli imithetho yokucoceka nococeko egumbini lakhe, gcina umzimba wakhe ucocekile kwaye ugcine ukuvuka nokulala, udlala imidlalo kunye nomsebenzi wengqondo, kunye nokunye okunjalo. Uhlala ebona ulawulo oluchanekileyo lolo suku ngokudibanisa kunye nokuzilolonga kweemoto kunye nokusilalisa njengesiqinisekiso sempilo kunye nophuhliso olufanelekileyo lomntwana.
Ulawulo lwemihla yokufundela kufuneka lucwangciswe kwaye lubekwe ngabazali kunye namanye amalungu omndeni omdala, ngokuxhomekeke kwimpawu zabo. Xa uneminyaka emithathu, umntwana kufuneka akhulise izakhono ezithile ezizinzile kwizinga le-reflex kunye nomkhwa. Ngalesi sikhathi, umzimba wakhe kufuneka uzigcine ngokuzimeleyo isingqimba sesiganeko sokuphila, oko kukuthi, urhulumente wolu suku. Kulawulo losuku lomntwana njengaloo ndlela, abazali kufuneka bacinge kwangaphambili kunokuba umntwana uza kufikelela kwiminyaka yobudala, oko kukuthi, ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Ngoko kuyimfuneko ukufundisa umntwana ngexesha elinye ukutya, ukulala, uhlale uphapheme, njalo njalo. Ulawulo lomhla womntwana oneminyaka emithathu ubudala luya kuba luhluke ngokwasemgangathweni kumntwana wesithandathu okanye iminyaka eyisixhenxe, ekubeni ngexesha lokulungiselela isikolo, uya kuchitha ixesha elingakumbi kwimisebenzi engenziwayo: ukufunda iincwadi, ukudweba nabanye. Nangona uneminyaka emithathu okanye emine umntwana uhamba kwaye udlala ngaphezulu. Yingakho kwixesha lokufundela lobomi bentsana, xa kuthatha ixesha elincinci lobomi obusebenzayo, kuyimfuneko ukuchitha imihla ngemihla yokuzivocavoca kunye nobusuku bokuhlamba kunye naye. Ngethuba lomsebenzi kubalulekile ukubeka iliso ukunyameka kokuthwala umntwana ngexesha lezemidlalo kunye neeklasi. Kubalulekile ukufundisa umntwana kwimigaqo yokunyamekela umzimba wakhe nococeko lwakhe. Ukongezelela, ukukhula okuchanekileyo kunye nokwakhiwa kwengane, kufuneka uqaphele rhoqo ukucoceka kwomoya ekamelweni lakhe, imeko ecocekileyo kunye nococeko kuyo, ukugcina ulawulo olufunekayo lobushushu kunye nomswakama.
I-Gymnastics kubantwana basenkulisa
Izenzo zokuzivocavoca kunye nabantwana beminyaka yobudala bezemfundo zingaqhutyelwa kokubili kwigumbi naphantsi kwezulu elivulekile. Igumbi kufuneka liphefumle ngokufanelekileyo. Ukuchitha i-gymnastics kuhle xa iifestile zivulekile okanye i window evulekile. Ukulungiselela i-gymnastics umntwana kufuneka abe nekhethekileyo, engcono kuzo zonke izambatho zendalo, izambatho ezihlambulukileyo. Ingaba yimfutshane kunye ne-T-shirt, i-suit suit kunye nokunye. Ngexesha loqeqesho ungasebenzisa izithuthi ezahlukeneyo okanye izixhobo zezemidlalo: iibhola, iiflegi, iipopu, izintambo zokunqumla kunye nokunye. Izenzo zokuzivocavoca ziyenziwa kangcono kumbhobho. Ukuyinkimbinkimbi yokuzivocavoca komntwana kunokwenziwa ngabanye. Kukulungele ukuthatha izenzo ezikopisha ukunyuka kwezilwanyana ezahlukileyo umntwana aziyo. Umntwana onomdla kakhulu uya kugxuma njengenqana, uhambe njenge-goose, i-gallop, njengegrigi, njalonjalo. Xa uqulunqa ubunzima bokuzibandakanya kwasekuseni, kufuneka udibanise kuyo iindidi ezihambayo zomzimba kunye namalungu ayo. Oku kuya kuqinisa umzimba wonke womntwana kwaye kuza kuncedisa ekuphuhlisweni jikelele kwentsana, zonke izihlunu kunye namalungu akhe.
I-Gymnastics enomntwana wale minyaka ichithwa kakuhle kwifomu yomdlalo. Ukuba intsapho inabantwana ababini okanye ngaphezulu, ungasebenzisa izenzo zokukhuphisana. Oku kuya kubangela umdla ngakumbi kubantwana, kwaye baya kuvuyela ukujoyina umdlalo-ukhuphiswano. Izivivinyo eziyinkimbinkimbi ezifuna ukuzivocavoca ezininzi kufuneka zenze ezinye izinto zilula okanye zenze ikhefu elincinane phakathi kwabo. Ukuba iiklasi ze-gymnastics ziqhutywe kusihlwa, ziza kubanjwa ngaphandle kweyure enye ngaphambi kokulala. Isidlo ngokuhlwa kwe-gym kufuneka sibe ubuncinane kwiyure nesiqingatha phambi kwakhe. Emva kokuzilolonga umzimba kufuneka kudlule ubuncinane imizuzu engamashumi amane, xa kuya kwenzeka, ngaphandle kokulimaza umzimba womntwana, ukuba udle. Ukubhukuda, ukubethelwa kunye nokuqhwitha, ukuhamba ngebhayisikili, ukuhamba ngebhayisikili kunenxaxheba ekuphuculweni komzimba womzimba kunye nokuqiniswa kwempilo yakhe.
Xa wenza i-massage yabantwana basenkulanga (ukususela kwiminyaka emithathu ukuya kweyisixhenxe), ungasebenzisa zonke iindlela zokusasaza. Kuyafaneleka kokubili ukuhlalisa umzimba kunye nokuhlalisa umzimba. Ngenxa yokuba ulusu lomntwana oneminyaka engama-school school is sensitive, kuyimfuneko ekuphunyezweni kwe-massage ukuqinisekisa ukuba ayonakalisi umzi womzimba wakhe. Ukunyakaza kwezandla kufuneka kube ngokuthobekileyo kunye nobuchule. Ukuzihlaziya kufuneka kumncede umntwana aze ancede ekuphumuleni umzimba womntwana. Ukuzihlamba kuqala ngokuqala ngokugubha. Le ndlela yenziwa ngeephetho zeminwe okanye yesundu. Izandla zobulali be-massage kufuneka zihambise xa zihambisa imizimba kunye ne-trunk yomntwana phezulu naphantsi. Isisu sisinywe kwisicetyhulwa kweso setyhula. Emva kokuqhawula, kufuneka uhluthwe. Kukho ukunyakaza okunamandla kwezandla, ezihambisa kunye nokwelula iindawo ezithile zesikhumba. Unokuyibhinqa umzimba womntwana ngesandla, kwintonga okanye iminwe, ngelixa uqwalasela amanyathelo okuphepha, njengokuba ngexesha le ntsebenzo, isikhumba esincinci somntwana singabanjwa. Ukuxubha kungenziwa nakwephi na. Okokuqala, ukugaya kwenziwa ngokukhawuleza, kwaye isantya sawo sanda kancane. Indlela ebunzima kakhulu yokuhlambalaza ukuxolela, ngoko kudinga ukunyakaza okunamandla kwezandla ze-masseur. Xa kuqhutyelwa, indawo ezithile zesikhumba kunye nezihlunu zomntwana zithathwa kwaye zikhuliswe. Kukho ukucima kwabo. Le ndlela ingenziwa ngesandla esisodwa, kuba indawo yomntwana incinci. Le nkqubo ayifanele ibe nefuthe elimnandi kumntwana, ngoko umxhasi kufuneka abale ngokuchanekileyo amandla ezandla kunye nexesha lokubonakalisa emzimbeni womntwana.
Indlela elandelayo - ukunyakaza - kungashiywe kwaye isebenzise ezinye zezinto zayo xa zihlalutya umzimba womntwana oseminyaka yobudala. Ukubakhombisa i-intlanzi yinkqubo ebandakanya ukunyakaza okukhawulezayo nokukhawulezayo okunyakaza, ukuxhamla, ukuxubha, kunye nokunye okunjalo, okuyiyo yonke into engasetyenziswa ukuhlambulula umzimba womntwana iminyaka emithathu ukuya kweyisixhenxe, kuba unesistim esingaqinisekanga kakhulu zenze iistimlostic and cardiovascular systems. Ngoko ke, le ndlela kufuneka isetyenziswe ngokucophelela. Emva kokufunyanwa nganye kubalulekile ukuba uqhube umzimba womntwana. Indlela efanayo kufuneka ibangele ukuhlaziya okuqhelekileyo okanye kwendawo. Ngoku siyazi indlela yokwenza i-massage yabantwana basenkulanga.
Ukuqulunqwa kweziphumo ze-urinalysis
Yintoni enokuyenza xa umntwana enqabileyo
Icandelo lomloyilo kuwo onke amabhinqa
Isifo sokufa ngokukhawuleza kubantwana
Isitayela esiphezulu se-4-style stylish
Ubusuku busukuba kubantwana
Indlela engcono kakhulu yokunyuka kweenwele kwimilenze